"သင်ကဘဝလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေနေပါသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ်နှင့်အတူထွက်ဆွဲထား့တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးရဲ့ buddy က, here you’ll be able to find exactly who you are looking for – pet lovers like yourself."
သင်ကဘဝလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေနေပါသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ်နှင့်အတူထွက်ဆွဲထား့တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးရဲ့ buddy က, ဤနေရာတွင်သင်ရှာဖွေနေကြတယ်ဆိုတာအတိအကျဘယ်သူရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ် - ကိုယ့်ကိုကိုယ်တူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မိတ်ဆွေတို့ကို. ဒါဟာပျော်စရာင်, အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, safe and anonymous – until you decide to take it further. ကျွန်ုပ်တို့၏ website အချင်းချင်းသိရန်နှင့်တွေ့ဆုံမည်ရဖို့ငါတို့၏အင်္ဂါများအတွက်မြောက်မြားစွာစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အဆင်ပြေနီးလာကမ်းလှမ်း.
Advanced specialist to detect scammer behaviour. Team of super humans work 24 နာရီတစျနေ့,7daysaweek to ensure that all of our members are genuine.
“After 15 months of dating, innumerable5page daily emails, many spent international calling cards, နှင့် 219 steps to the top of the St. Augustine Lighthouse, I finally popped the question and Jennifer said 'yes'”
Trending articles with tips on everything from ချိန်းတွေ့, ပထမဦးဆုံးရက်စွဲများ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ & လိင် နှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန်.
The leading free online dating website created exclusively for pet lovers. သင်ကဘဝလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေနေပါသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ်နှင့်အတူထွက်ဆွဲထား့တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးရဲ့ buddy က, ဤနေရာတွင်သင်ရှာဖွေနေကြတယ်ဆိုတာအတိအကျဘယ်သူရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ် - ကိုယ့်ကိုကိုယ်တူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မိတ်ဆွေတို့ကို.
© Copyright 2017 ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့. နှင့်ဖွဲ့ အားဖြင့် 8celerate စတူဒီယို
Monthဇန္နဝါရီလ February March April မေ ဇွန်လ ဇူလိုင်လ August စက်တင်ဘာလ October November ဒီဇင်ဘာလ
By clicking 'Join Now' you are agreeing to our သတ်မှတ်ချက်များ